Black Magic: Myanmar Flag & NLD Carrier Logo For IOS (You can install from Cydia Now!)
Myanmar Flag & NLD Carrier Logo For IOS (You can install from Cydia Now!)
Posted by Black Magic | Posted in Ways For iOS | Posted on 12:27 PM
အကို မိုးသိကြား ရဲ.ဒီပို.စ်လေးမှာ "Status Bar ၏ Carrier Logo ကို မိမိစိတ်ကြိုက် ဖန်တီးနည်း"
ကိုရှင်းပြပေးထားသော်လည်း.....ifunbox ကိုမသုံးတက်သောသူတွေအတွက် အခက်အခဲးဖြစ်နေကြပါမယ်ထင်ပါတယ်......ထိုအခက်အခဲးကိုဖြေရှင်းပေးရန်အတွက်....အကို မိုးသိကြား ရဲ. Logo လေးတွေကို ကျွန်တော်...Cydia ကနေအလွယ်တကူသွင်းလို.ရအောင် Deb File လုပ်ပြီး ပြန်ရှယ်ပေးထားပါတယ်......Deb File လုပ်နည်းကို ကျွန်တော်၏ ဆရာ......ဦးဦးမုတ်ဆိတ် (KO Thethmuswe) ကလွန်ခဲ့တဲ့ ၁ နှစ်လောက်က သင်ပေးထားပါတယ်..... **Zeppeline သွင်းယူခြင်း**
ပထမဦးစွာ Cydia -> Sources -> Edit -> Add တွင် " http://cydia.myrepospace.com/komin27/ " ကို ထည့်သွင်းပါ။
http://cydia.myrepospace.com/komin27/ တွင် "Zeppelin " ကို ရှာပြီး Install လုပ်ပါ။
ထို့နောက် Settings -> Zeppelin -> Enable ကို ON ပေးပါ။
"Myanmar-Flag " ကို ရှာပြီး Install လုပ်ပါ။
"LND-Carrier Logo " ကို ရှာပြီး Install လုပ်ပါ။
iDevice ၏ Settings -> Zeppelin -> Theme ထဲမှာ တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်...